एनआरएनएको अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी, इजरायलले यस पटक पनि पाएन अवसर :: a1nepal.com.np
१ कातिक । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए, आइसिसि) को अध्यक्षमा कुमार पन्त निर्वाचित भएका छन् । केही क्षण अघि सम्पन्न मतगणनामा अर्का अध्यक्ष पदका प्रत्यासी कुल आचार्यलाई पराजीत गर्दै पन्त निर्वाचित भएका हुन् ।
कुल २ हजार ५ सय ७० मतदाता मध्ये खसेको २ हजार ३ सय ४४ मतमा १ हजार १८१ मत प्राप्त गरी प्रतिस्पर्धी आचार्यलाई १११ मतान्तरले पराजित गर्दै कुमार पन्त संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
यसैगरी पाँच उपाध्यक्षमा डा. बद्री केसी, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, सोनाम लामा, मन केसी र महिला उपाध्यक्षमा रविना थापा निर्वाचित भएकी छिन र महासचिवमा पनि पन्त प्यानलकै डा हेमराज शर्मा विजयी भएका छन् । यस्तै सचिवमा गौरी जोशी र आरके शर्मा विजयी भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा महेश श्रेष्ठ र सहकोषाध्यक्षमा लोक दाहाल निर्वाचित भएका छन् ।
यस पटक इजरायलवासी एनआरएनले एनआरएनएमा आफ्नो बलियो स्थान वनाउने भरथेक कोसिस पनि खेर गएको छ । इजरायलबाट दिपक प्रसाद ओलीले सचिवमा उम्मेदवारी दिएका थिए । दोस्रो पटक आइसिसीको पदाधिकारीको लागि चुनावमा होमिएका एनआरएनए इजरायलका पूर्व आइसिसी सदस्य तथा वर्तमान संरक्षक ओलीले यस पटक पनि पराजय भोग्नु परेको छ । निर्वाचनको परिणाम पश्चात सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा प्रतिक्रिया दिदै ओलीले आफूलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अग्रज तथा मतदान गर्ने र नगर्ने सबै मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । उनले स्टाटसममा लेखेका छन् – ” एनआरएनएका सम्पूर्ण अग्रज तथा सहकर्मी साथीहरु, हिजो मतदानका लागि घन्टौँ जुन धैर्यताका साथ लाइन बसेर मतदान गर्नुभएको छ, त्यसका लागि हार्दिक आभार ! ज–जसले मलाई विश्वास गरेर मतदान गर्नुभयो यहाँहरु सबैलाई मनदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।यस्तै नदिने मित्रहरुलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँहरुले अर्काे अर्काे पटक अवश्यक दिनु नै हुनेछ । अभियान हो हीरजित निस्चित छ , अब मतगणनाबाट नतिजा जस्तो आएपछि यहाँहरुले देखाएको मायालाई शिरोधार्य गर्दै एनआरएन अभियानमै होमिइरहने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।”
उपाध्यक्ष –बद्री केसी
उपाध्यक्ष –सोनम लामा
सचिव – गौरी जोशी
कोषाध्यक्ष – महेश श्रेष्ठ
सह कोषाध्यक्ष – लोक दाहाल
निर्वाचनमा नेकपा निकटको रुपमा कुमार पन्त र काँग्रेस निकटको रुपमा कुल आचार्यले प्यानल नै बनाएर चुनाव लडेका थिए । आगामी दुई वर्षको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गरिएको थियो ।
इनास अष्ट्रियाको समुद्घाटन कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पुरा सन्तोषी भण्डारीको अध्यक्षतामा इनास अष्ट्रिया गठन अस्ट्रेलियन नेताद्धारा वुद्ध र सगरमाथाको देश भ्रमण गर्न आग्रह ९ बर्षकै उमेरमा टाइकोण्डोमा ब्ल्याक बेल्ट बडा दशैको अवसरमा इजरायलमा एनआरएनले मैत्रीपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ इजरायलको अध्यक्षमा बिमला मोक्तान चयन हिन्दु जागरण अभियान इजरायलद्वारा धर्मगुरु श्रीनिवासमाथिको आक्रमणको निन्दा (प्रेस विज्ञप्ति) आध्यात्मिक प्रवचनकालागि भागवत वाचिका राधिका दासीजी इजरायलमा इजरायल विशेष कार्यक्रम तथा रात्री भोजको साथमा ग्याल्वो ल्होसार मनाइदै श्री स्वस्थानी फूलपाती बिसर्जन तथा महा-शिवरात्री कार्यक्रमको तयारी तिब्र
← वाङमय शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी सेलिब्रिटिहरुका बीच सम्मानित	प्रथम ह्योल्मो चलचित्र “मेतोक” नोभेम्वर १५ तारिख शुक्रबार इजरायलमा प्रदर्शन हुने →